हावा हुरी आउने कुरा पहिला नै थाहा हुन्छ तर मतलब छैन नेपालमा । - JagaranPost
Home/थप/प्रविधि/हावा हुरी आउने कुरा पहिला नै थाहा हुन्छ तर मतलब छैन नेपालमा ।
अम्बरिस पोख्रेल –
अब अकालमा ( शायद हावा हुरी बाढी पहिरो इत्यादि होला) कोही मर्नु पर्दैन । यो सरकारले सबै व्यवस्था गरिरहेको छ । नाइट भिजन हेलिकप्टरको नी व्यवस्था गरेको छ ।
_____ पिएम अफ नेपाल
१. विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा लगानी तथा अनुसन्धान गर्न नचाहने सरकार, राज्य र नेपालका विश्वविद्यालय हरु रहेको देशमा सानो सानो घटना वा परिस्थितिमा पनि धेरै धन जनको नोक्सान हुने गर्छ ।
२. विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरौँ, देश समृद्ध पारौं । तर लगानी गर्दैनन, यही दुःखद सत्य हो ।
३. हावाहुरी आउँदै छ भन्ने कुरा पहिला नै थाहा हुन्छ । तर प्रविधिको प्रयोग चालू राखेको हुनु पर्छ । त्यसको लागि पैशा विनियोजन गरिएको हुनु पर्छ । नेपाल सरकारले दुवै चीज गरेको छैन । दुवै चीज गर्ने कुरा पनि भएन । कमिसन आउँदैन । बरु अब पीडितहरु माथि राहात इत्यादिका नाममा राजनीति गर्न पाइन्छ । बरु भाषण गर्ने निम्न स्तरको अवसर पाइन्छ ।
४. पार्टीमा जो “हली जस्तो” नेता छ तर मन्त्री पनि बनाउनु पर्ने छ त्यही बिज्ञान प्रबिधि मन्त्री बनेको हुन्छ नेपालमा । यसले सरकारी तथा पार्टीको रवैया कस्तो छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
५. हिजो जस्तै यस्ता विपतमा जो पनि र जहाँ पनि पर्न सकिन्छ । त्यसैले सबै सरकारहरू र राज्य विज्ञान प्रविधि को प्रयोगमा संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । तर यहाँ जसलाई पर्यो पर्यो । अरुलाई केही मतलब छैन । जिम्मेवार पदमा बसेका भए पनि मानिसहरू गैह्र जिम्मेवार छन्।
६. जम्मा दुई करोड खर्च गरे अग्रिम हुरी बतास पत्ता लागि हाल्छ ।
वार्षिक जम्मा दुई करोड काे दरले नेपाल सरकारले लगानी गर्ने हो भने नेपालको पूर्व मेचि देखि पश्चिम महाकालीसम्म कहाँ कहाँ कत्रो साइजको आधी हुरी आउँदै छ पहिला नै भन्न सकिन्छ । यो लगानी राज्यको लागि ठूलो हुँदै होइन तर चासो छैन । चासो छ भने सुरु गरे भयो नी ।
६. मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
(प्रसंग हिजोको हुरीले दर्जनौंको मृत्यु तथा सयौ घाइते)
जल तथा मौसमविद डा.अम्बरिस पोख्रेल को नियमीत बुंदागत टिपोटहरु जागरणपोस्टमा नियमित प्रकाशित हुँदै आईरहेको छ।